Udgoonyada udgoon ee ugu fiican ee lala qaybsado lammaanahaaga | Ragga Stylish
Udgoonyada udgoon ee ugu fiican ee loo qaybsado lamaane
Ragga Stylish | | Goobo
Wax kasta oo daba socda sinnaanta ayaa si isa soo taraysa loogu guulaystay. Tanna si wanaagsan ayaa loo tarjumay dunida fashion, Oo sii kordheysa ee bixisa dharka unisex ee ku habboon labada jinsi. Laakiin waqti dheer ka hor inta astaamuhu aysan ahayn muwaadiniinta, qaar ka mid ah fashionistas, kuwaas oo ku dhiiraday inay xirtaan qaybo ka mid ah noocyadooda kala duwan. Xaqiiqdii, waxaan ku aragnaa inta badan saameynaha. Hagaag, adduunyada udgoonka iyo udugga ayaa sidoo kale rabay inay qaado talaabo dhanka sinaanta ah. In kasta oo aan noocyo badani weli dhicin, haddana qaar baa jecel Calvin Klein Waxay na siiyeen ikhtiyaarro sannado ah cadarka unisex.
1 Maxay cadarku u leeyihiin jinsi?
2 Maxaa loo xiraa cadarka unisex
Maxay cadarku u leeyihiin jinsi?
Kahor, noocyadu waxay u heellanaayeen abuurista carafyada si cad u kala duwan. Qaarkood waxay ku jiheysnaayeen ragga qaarna dumarka. Iyo sidee tan loo sameeyay? Iyada oo la adeegsanayo udgoon aad iyo aad u dabeecad wanaagsan. Ubax, ka Jasmine ama lavender-ka ayaa ahaa caraf si cad loola xiriiriyay dumarka. Taabadalkeed, geedkii ama liin dhanaanta waxa lala xidhiidhiyay cadarrada ragga. Oo sidaasay ahayd sannado badan.
Iyadoo ay taasi jirto, si kastaba ha noqotee, haweenka iyo ragga qaarkood waxay ku dhiirradeen inay xirtaan cadarka jinsigooda kale. Waana fududahay in la fahmo, maxaa yeelay waxaan ka hadleynaa caraf udgoon, dhadhamkuna waa wax aad u shakhsi ah Iyo isugeynta urta udgoonku waa mid gebi ahaanba bulsho ah. Taasi waa sababta noocyo badan ay ugu qamaarayeen cadarka unisex sanado. Taasi waa, waxay si fudud u abuuraan caraf aan calaamadeysneyn, oo leh ur khafiif ah oo macaan, oo qofkii dareemaa tooda uu isticmaali karo.
Maxaa loo xiraa cadarka unisex
CK one, tusaale cadarka unisex
Haddii ay jirto astaan ​​horudhac u ah suuqa cadarka unisex, waa Calvin Klein, labadeeda soo jeedin ee caadiga ah: Cadar Clavin Klein y CK Kow ayaa halbeeg u ahaa unumex barafuun sanado badan. Laba udgoon oo cusub oo udgoon maalin kasta.
Maxaa loo xiraa cadarka unisex? Hagaag, maxaa yeelay qofna yuusan kuu sheegin carafta aad u adeegsanayso sababo jinsi awgood. Sababtoo ah waxa ugu fiican ayaa noqon kara in si xor ah loo doorto caraftaas iyo urkaas noogu badan dabeecadaha, waxa aan ugu jecelahay iyo waxa noogu habboon. Tani waa caqabadda warshadaha, taas oo noocyo badan horeyba u wajaheen.
Udgoonku ma laha dabeecad gaar ah, kani waa urur bulsheed oo uu sameeyo nin, gaar ahaan warshadaha. Sidaa darteed, haddii nin u aqoonsado wax kasta oo ubax ah, wuxuu si fiican u isticmaali karaa cadarka 'rose'. Oo hadday naaguhu isku gartaan inay yihiin cusbada liin dhanaanta, waxay dareemi doontaa raaxo badan oo ay u leedahay cadar uraya sidan.
Intaa waxaa dheer, waan ka soo qayb galnaa suuq sii kordhaya oo kaladuwan, oo na siiya caraf aad u adag, oo leh urtooyin kala duwan oo aad u xiiso badan. Waa arrin raadinta urta na astaamaha noogu badan, innaga oo iska dhaafna rag iyo dumar ha ahaato.
Layaab malahan inaan aragno intaa iyo in kabadan cadarka unisex dukaamada oo jooji aragtida kala sooca cad ee ragga iyo udgoonka dumarka. Farqiga u dhexeeya ee lagu calaamadeeyay qaraxa ka dhacay warshadaha, oo calaamadeeyay taariikhda waaxdan oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Goobo » Udgoonyada udgoon ee ugu fiican ee loo qaybsado lamaane
Ogeysiis aad u fiican. Cadar malaha wax galmo ah
Qorshooyinka Maalinta Jacaylka iyo hadiyadaha
Sida loo waco abs